Salaamanews » Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xeer-hoosaadka (Daawo-Muuqaal)
Home » Warar Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xeer-hoosaadka (Daawo-Muuqaal) Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 3rd, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Baarlamaanka Soomaaliyeed oo codka kalsoonida siiyay xukuumadda cusubBaarlamaanka Soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay miisaaniyadda 2013Ra’isal wasaaraha oo dhawaan lagu dhawaaqi doono (Aqriso-Xog)Ciidamada huwinta ah oo guud ahaan la wareegay KismaayoHay’adda Lacag Adduunka oo Aqoonsatay Dowladda Soomaaliya
Kulanka oo ay soo xaadireen 188 xildhibaan ayaa guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan(Jawaari) oo shir guddoominayay wuxuu sheegay in aysan jirin cid ka soo horjeesatay in la ansixiyo xeer hoosaadyada oo ka kooban 11 qodob.Mr Jawaari ayaa tilmaamay in wixii maanta ka dambeeya ay xeerarkani yihiin kuwo sharci ah oo uu baarlamaanku u hoggaansami doono.
“Dhamaan xubnaha baarlamanka ee soo xaadiray waa 188-xubnood waxayna ku codeeyeen “HAA” ma jirto cid ka soo horjeesatay sidaas ayuuna ansax ku noqon doonaa xeer hoosaadka baarlamaanka” ayuu yiri Prof. Jawaari.
Xubnaha baarlamaanka cokooda ayay dhiibanayaan
Codeynta oo ahayd mid gacan taag ah ayaa inta badan xildhibaannadii ka hadlay xarunta golaha shacabka waxay soo jeediyeen in qodobbo ka tirsan xeer-hoosaadyada wax laga bedello, walow markii dambe la isku afgartay qodobbadii lagu muransanaa.
Xildhibaannada Soomaaliya ayaa sidoo kale horay u meel-mariyay miisaaniyadda saddexda billood ee ay dowladdu ku shaqayn doonto.
Halkan ka daawo Ansixinta xeer-hoosaadka baarlamaanka.
Info@salaamanews.com Tags: warar « Qoraalkii HoreFaahfaahin dhab ah oo ka soo baxday weerar lagu gaaday wafdigii wasiirka A/gudaha	Qoraalka Xiga »Golaha wasiirrada oo ansixiyay miisaaniyadda 2013	Halkan Hoose ku Jawaab